Ergaygga Gaarka ah ee Maraykanka: Cadaadiska ayaa ugu dambeyntii ku saari doona madaxweynaha Venezuela – Walaal24 Newss
Maamul-goboleedka Trump ee Venezuela ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in kordhinta cadaadiska caalamiga ah ay ugu dambeyntii horseedi doonto in laga saaro Madaxweynaha Nicolas Maduro.
Ergeyga gaarka ah ee Elliot Abrams ma uusan saadaalin Karin markii Maduro uu iska casilayo. Laakiin Abrams waxa uu yiri “duufaan ayaa dillaaceysa” gudaha dawladda iyo hoggaamiyaha Venezuela “ma awoodi doono in ay sii dheeraato cimilada.”
Abrams ayaa markhaati ka ah Guddiga Arimaha Dibadda ee Arbacadii, ku dhawaad hal bil kadib markii Maraykanku qaatay talaabo aan caadi ahayn oo lagu aqoonsanayo hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ah madaxweynaha kumeelgaarka ah.
Waxa uu u sheegay xildhibaannada in cunsuriyada Mareykanka ay bilaabeen in ay qaniinaan waddanka dhaqaale ahaan burburay waxaana la rajeynayaa in ay soo saaraan waxsoosaarka saliida in la gooyo nus dhamaadka sanadka.
Abrams ayaa ku boorisay ciidamada amniga Venezuela in ay ka soo horjeestaan Maduro.
Manchester Unetid guul daradii ka soo gaartay PSG lugta hore wareega 16 ee Champions League
Gen. Thomas “AFRICOM waxay isticmaashaa dowladaha oo dhan si ay ula shaqeeyaan……….
Madaxweynaha K/Galbeed oo magacaabay qaar kamid ah Golaha Wasiirada ee maamulkaasi
Dowladda Sacuudiga oo sheegay maraakiibteeda saliidda qaada oo la weeraray
Afar dowladood oo geeska Afrika oo ku heshiiyay in ay dhistaan qad isku xira caasimadohooda
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo salaadda roob-doonta kala qayb-galay boqolaal shacab ah oo ku tukaday Masjid-jaamaca magaalada Hargeysa
Daawo: Dowladda Ingiriiska oo deeq Gadiidka Booliska gudonsiisay Maamulka Soomaliland